Ukushintshaniswa kweKuCoin: $ 150 Million KuBitcoin nase-Ethereum Kubiwe | ICoinGenius Ibamba Umcimbi we-Virtual Crypto
Ukushintshaniswa kweKuCoin: $ 150 Million KuBitcoin nase-Ethereum Kubiwe
Izikhwama ezishisayo ze-cryptocurrency exchange exchange KuCoin ziye zathikamezeka futhi zancipha okungenani izimpahla zedijithali ezingabiza u- $ 150 million.
Inkampani kubika lo mcimbi "njengesigameko sokuphepha" emahoreni ambalwa adlule, eqinisekisa ukuthi "ingxenye yeBitcoin, i-ERC-20, namanye amathokheni ezikhwama ezishisayo zikaKuCoin akhishwe ngaphandle kokushintshaniswa."
Insiza yokuqapha iWhale Alert ilandelele izinhlamvu zemali eziningi ezithunyelwe leli kheli elithile. Emahoreni ambalwa adlule, ikheli libone ukuthengiselana okuncane okuningi, okungenzeka ukuhlolwa.
Amanye ama-altcoins angaziwa adluliselwe ezikhwameni ezishisayo zokushintshanisa afaka i-DGTX, i-AGI, i-SNX, i-DX, i-SNT, i-DRGN, nokuningi.
Ukuqinisekisa ukuthi okunye ukuhoxiswa okungagunyaziwe akukwazi ukwenzeka, uKuCoin umise wonke amadiphozi nokukhipha imali ngenkathi kwenziwa "ukubuyekezwa okuphelele kwezokuphepha."
Ukushintshana okuzinze eSingapore kugomela ukuthi kusetshenziswe kabusha izikhwama zemali ezishisayo ngemuva kwesigameko. Isitatimende siqinisekisile ukuthi izikhwama ezibandayo ziphephile futhi azilimazi, futhi abasebenzisi abalahlekelwe yimali bazobuyiselwa “ngokuphelele yiKuCoin kanye nesikhwama sethu somshuwalense.”
Isikhulu esiphezulu seBinance uChangpeng Zhao, phakathi kwabanye abantu abavelele kule mboni, sikhombise ukwesekwa futhi ethembisiwe ukuthi inkampani yakhe "izosebenza" ngokuzimisela ngesikhathi sophenyo.
I-cryptocurrency yendabuko yokushintshana izwa imiphumela emibi ngokushesha. Izabelo zeKuCoin (KCS) zehle zisuka ngaphezu kwe- $ 1 ziye ku- $ 0.86 ngemizuzu. Kusukela lapho, intengo yethokheni ibuyile ngezinga elithile futhi ihweba ngaphansi nje kwe- $ 1.
KCSUSD. Umthombo: TradingView
Izihloko ezihlobene:ikheliI-AltcoinsizimpahlaBitcoinI-BitmexblockchainCeochangpeng zhaoIzinhlamvu zemalicryptocurrencycryptocurrency exchangeidiphozidigitalIzimpahla ZedijithaliI-ERC-20EthereumumcimbiukushintshanisaOkukhethekileIzimaliBAMBILIisikhwamaikusasangaphandle kwemvumeIndustryInsuranceuphenyoJULANII-KCSKuCoinkucoin exchangeukuqaphaInaninokuvikelekashareukwabelanaUxhasiweUkushintshaniswaAmadokhumentiUkuhwebaukuthengiselanaUSDTwalletsI-WhaleIsexwayiso SomlazaWHO
Enye inguqulo yamahhala ye-Microsoft Office ehlelelwe ukukhishwa ngo-2021
Ukwephula: I-DeFi Protocol Harvest Finance Attack Ekhombe Amachibi Amanzi
I-Bitcoin Ibe Nayo Nje Ukuvalwa Kwayo Okusezingeni Eliphakeme Kakhulu Kwamasonto Kusukela ngoJan-18 Ngenkathi i-ETH Eyes $ 400 (Ukubuka Kwemakethe)
Umsunguli we-Alibaba uJack Ma: Izimali Zedijithali Zingadala Inani
I-SwapSpace: Ukushintshaniswa Okusheshayo kwe-Cryptocurrency ngaphandle kwezimali ezengeziwe
UHacker ubuyisa u- $ 2.5 Million kuNkontileka Yomqashi Wezezimali Yokuvuna
12 amaminithi adlule
Imininingwane mincane phansi okwamanje njengoba isimo siqhubeka, kepha iDeFi protocol yokulima isivuno iHarvest Finance kubonakala sengathi ibe yisisulu sakamuva sokuxhashazwa ngumlingisi ononya.
Ithimba njengamanje libuyekeza nge-feed yalo ye-twitter kepha kubonakala sengathi 'ukuhlaselwa kwezomnotho' kwenziwe echibini lalo le-Curve y. Lokhu 'kwelule intengo yezinhlamvu zemali eziqinile ku-Curve kungalingani'.
Sisebenza ngenkuthalo odabeni lokunciphisa ukuhlaselwa komnotho kumachibi e-Stablecoin nase-BTC, futhi sizobuyekeza kule ntambo ngesikhathi sangempela lapho nje imininingwane eyengeziwe isitholakala
- Izimali Zokuvuna (@harvest_finance) October 26, 2020
Amanani amakhulu wezimpahla afakiwe futhi ahoxisiwe kusuka ku-protocol kulokho okubonakala kungukuhlaselwa kwe-arbitrage. UDeFi Prime naye ukuqinisekisile lokhu kutwitter yakamuva njengoba iqaphe isimo.
🚨 Something shady kwenzekani ngeHarvest Finance kanye nama-arbs amakhulu phakathi kweHarvest neCave 🚨
Isimo esithuthukayo futhi sidinga ukubhekwa ngeso elibukhali.
- Ukuhlanjululwa (@defiprime) October 26, 2020
Ukuvikela abasebenzisi, iHarvest Finance idonse izimali zechibi le-BTC Curve esiteji sayo yengeza ukuthi zonke izimali ze-solidcoin ne-BTC zivikelekile. Ngesikhathi sokuloba bekungakacaci ukuthi ngabe zikhona yini izimali ezilahlekile.
"Ukusho okucacile: ukuvikela abasebenzisi, imali engu-100% yezimali zamasu ejika le-Stablecoin ne-BTC ihoxisiwe kusuka kucebo kuya egumbini."
Izimali Zokuvuna zingenye Iphrothokholi ye-DeFi efuna amachibi ahola kakhulu ukufuya, afana neYearn Finance. Ukulandela iphethini manje ekhathele futhi ephindaphindwe kaningi, inethokheni layo le-FARM elisatshalaliswa njengomvuzo kubahlinzeki bezimali.
Ithimba lithi izinkontileka zalo ezihlakaniphile bezikhona zihloliwe ngu-Haechi Labs noPeckShield. Akukacaci okwamanje ukuthi lokhu kuhlasela kungumphumela wephutha lekhodi yenkontileka ehlakaniphile.
Ngokusho kukaDeFi Pulse, iHarvest Finance ithole ngaphezulu kwe- $ 1 billion ngenani eliphelele elivalelwe ukungena emapulatifomu amahlanu aphezulu e-DeFi, noma kunjalo, lokho kwase kuqale ukwehla njengoba izindaba ziqala.
Isithombe - defipulse.com
Isimo okwamanje siyakhula futhi izibuyekezo zakamuva zithunyelwa kokuphakelayo kwe-twitter yeHarvest Finance: https://twitter.com/harvest_finance
Umthombo: https://cryptopotato.com/breaking-defi-protocol-harvest-finance-attack-t target-liquidity-pools/
Ngemuva kokumaka ukuphakama okubili okulandelanayo minyaka yonke esikhathini sezinsuku ezimbalwa, iBitcoin seyizolile kepha isadlula ngaphezulu kwama- $ 13,000. Izinhlamvu zemali eziningi ezihlukile ziye zahlala zizinzile, futhi ikephu emakethe isazokwehla ngaphezu kwama- $ 400 billion ngokuqinile.
I-Bitcoin ihlala ngaphezulu kwe- $ 13k
Yize iBitcoin iqale ngempelasonto ngokuma okubonakalayo, impahla yangena ngeSonto ngerowu. I-BTC ibithengisa ngo- $ 13,100 kepha yaqhuma kakhulu ku-a okusha 2020 okuphezulu ngaphezulu kwe- $ 13,350.
Ngokushesha ngemuva kwalokho, i-cryptocurrency ifakwe ngamanani, okuholele ekutheni i-intraday yayo iphansi ibe ngama- $ 12,900. Yize kunjalo, izinkunzi zithathe ukwehla kwentengo futhi zaqhubela iBTC phezulu.
Kuyaphawuleka ukuthi lokhu bekungukuvalwa kweBitcoin okuphezulu kakhulu masonto onke kusukela ngoJanuwari, 2018.
Ishadi Lezomlando le-BTC / USD. Umthombo: Twitter
Emahoreni angama-24 adlule, iBitcoin ibizinzile uma kuqhathaniswa. Ifinyelele phezulu nsuku zonke cishe ngama- $ 13,150 futhi ibuyise kancane kusukela lapho yaya ku- $ 13,050. Ukuqhubeka nokuqhutshwa kwayo kwezinkunzi kwakamuva, iBitcoin kufanele inqobe i- ukumelana kokuqala ku- $ 13,200. Ngokuqhubeka phambili, i-BTC ingahlangabezana nezingqinamba ku- $ 13,400 ngaphambi kokuthola ithuba lokuphonsela inselelo izinga eliphakeme le-2019 cishe ngama- $ 13,900.
Ngenye indlela, i- $ 13,000 isebenza njengokwesekwa kokuqala uma kwehla intengo. Okulandelayo ku- $ 12,700 naku- $ 12,500.
Izinselelo ze-Market Cap Ziyinselelo engu- $ 400B
Ukwanda kwamanani kwakamuva kududule izimali eziqongelelekayo zezimakethe zawo wonke ama-cryptocurrensur cishe ku- $ 400 billion. Imethrikhi ize yenyuka ngaphezu kwalelo zinga kafushane izolo kepha kuze kube manje isalwela ukuyinqoba ngokuphelele.
Usonhlamvukazi bemakethe ye-Cryptocurrency. Umthombo: CoinMarketCap
Iningi lama-altcoins angakusizi ukweqa izinga lama- $ 400 billion emahoreni angama-24 edlule. Njengoba igrafu engezansi ikhombisa, iningi labo likhombise ukuguquguquka okuphansi ngisho nokuhlehla okuthile.
U-Ethereum ukhulume cishe ngo- $ 420 ezinsukwini ezimbalwa ezedlule kepha ubelokhu encipha kancane kancane kusukela lapho. I-ETH manje ihweba ngenhla nje kwe- $ 403. Ngaphandle kokwanda okuncane, i-Ripple iseseduze ne- $ 0.253.
I-Bitcoin Cash (-0.9%), i-Chainlink (-2.7%), ne-Cardano (-1.7%) ilahlekelwe inani kusuka kwabangu-10 abaphezulu.
I-BitcoinSV (5%) ne-Monero (4.7%) ingabazuzi abahlaba umxhwele kakhulu abavela kuma-altcoins amakhulu.
Ukubuka konke Kwemakethe ye-Cryptocurrency. Umthombo: Qoqa i-Crypto
Okunye ukuzuza kubonakala kuVelas (20%), Filecoin (16%), kanye neQuant (10%). Ngokuphambene nalokho, i-Ocean Protocol (-12.5%), i-ABBC Coin (-9%), i-Energy Web Token (-7.3%), i-Crypto.com Coin (-7%), ne-Ampleforth (-6.5%) ilahlekelwe kakhulu ku isikali samahora angama-24.
Umsunguli futhi owayengusihlalo omkhulu wenkampani yezobuchwepheshe yamazwe amaningi i-Alibaba Group, uJack Ma, ukholelwa ukuthi abalawuli bomhlaba kudingeka bathuthukise umthetho osondelene nezimali zedijithali njengoba bengakha inani.
Ma: Izimali Zedijithali Zingadala Inani
Enkulumweni yakamuva kubika nguBloomberg, usozigidi waseChina wagxeka uhlaka lwamanje lokulawulwa kwezezimali emhlabeni jikelele ngokungabi bikho kwezinto ezintsha. Uthe izimboni ezigadayo zigxile kakhulu ekulawuleni ubungozi, okubaxoshe ekuphishekeleni noma yikuphi okwenzekayo, futhi kuyaqabukela “babheke amathuba abantu abasha namazwe asathuthuka.”
Ngokusho kukaMa, amaBasel Accords "ayiqembu labadala" elixazulula izingqinamba zezinhlelo zezimali ezisebenza iminyaka kuphela. Amazwe afana neChina, asathathwa “njengentsha,” adinga ukwenziwa okusha ukuze “kwakhiwe uhlelo lwezemvelo lokuthuthuka okunempilo embonini yendawo.”
Enye indawo lapho abalawuli bengakhuphula ukugxila kwabo yizimali zedijithali. Uma ababheki bezwe bomhlaba bengayithuthukisa indlela abasebenza ngayo, izimali ezibonakalayo zingadlala indima ebalulekile ekwakheni uhlelo lwezezimali oluzosetshenziswa eminyakeni engama-30 ezayo, engeza.
"Imali yedijithali ingadala inani, futhi kufanele sicabange ngokuthi singasungula kanjani uhlobo olusha lohlelo lwezezimali ngemali yedijithali."
UJack Ma. Umthombo: Nikkei
Akekho (Mhlawumbe) Akakhulumi Nge-Bitcoin
Yize umsunguli ka-Alibaba engacacisanga ukuthi wayecabangani lapho esebenzisa igama elithi "imali yedijithali," umlando wakhe uphakamisa ukuthi mhlawumbe kwakungeyona iBitcoin. Eminyakeni embalwa eyedlule, uMa waxwayisa abantu ukuthi baqaphele futhi wathi ukuthi uhlala kude ne-cryptocurrency eyinhloko njengoba kungenzeka "kube bubble."
Kodwa-ke, wayethandeka kakhulu kubuchwepheshe obusisekelo beBitcoin - blockchain. Inkampani ayisungulile ibibandakanyeke kumaphrojekthi amaningi ahlobene ne-blockchain eminyakeni embalwa edlule. Alibaba ngisho umkhankaso izinkampani ezimbili ezingaphansi kwe-DLT eShanghai ngonyaka odlule.
Ngokwengeziwe, a recent umbiko kuqokonyiswe ukuthi i-Alibaba iyinkampani enamalungelo obunikazi be-blockchain kakhulu.
Ngakho-ke, uma uMa engakhulumi ngeBitcoin njengemali edijithali enenani, mhlawumbe ukhuluma nge-China CBDC ezayo. Alibaba has ihlukaniswe nezinye izinhlangano ezinkulu zaseChina, ezifana neChina Merchant Bank, iTencent, neHuawei, ukuthuthukisa imali yasebhange ephakathi yesizwe.
Ngaphandle kwalokho, izwe elinabantu abaningi emhlabeni nalo liye laphumela obala pro-blockchain ngenkathi kuqinisekiswa ukuthi iBitcoin namanye ama-cryptocurrensets avinjelwe ngokusemthethweni ngaphakathi kwemingcele yawo.
Izimpawu ezifakiwe Zezithombe ze-CNBC